Manchester United oo ku dhow inay la saxiixato daafaca kooxda Leicester City ee Harry Maguire – Gool FM
Manchester United oo ku dhow inay la saxiixato daafaca kooxda Leicester City ee Harry Maguire
(England) 12 Maajo 2019. Sida laga soo xigtay wargeyska “The Sun” ee dalka England, daafaca kooxda Leicester City ee Harry Maguire ayaa qarka u saaran inuu ku biiro Manchester United inta lagu jiro suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
26 jirkan heerka caalami ee xulka qaranka England ayaa lala xiriirinayay ku biirista kooxda Manchester United tan iyo xagaagii hore, balse haatan waxay u muuqataa inuu ku dhow yahay ku biirista Red Devils.
Wargeyska reer England ayaa wuxuu hadalkiisa intaas ku sii daray in kulanka maanta dhex mari doona kooxaha Leicester City iyo Chelsea uu noqon doono kulankiisa ugu dambeeyay uu u ciyaaro kooxda uu haatan ku sugan yahay Harry Maguire, isagoo doonaya inuu tijaabiyo khibrad cusub ee mid ka mid ah kooxaha waaweyn.
Manchester United ayaa ah kooxda ugu dhow ee la saxiixan karta Harry Maguire, marka loo fiiriyo baahida ay u qabto inay ku xoojisato qeybta dambe ee daafaceeda ugu yaraan labo ciyaaryahan ee cajiib ah, kaddib xili ciyaareed niyadjab ah ay soo qaateen.
Leicester City ayaa la filayaa inay ku iibin doonto daafaceeda caalamiga ah ee Harry Maguire ugu yaraan £ 60 milyan, iyadoo Red Devils ay u muuqato inay ogolaan doonto qiimaha miiska saaran.
Si kastaba ha ahaatee, Harry Maguire ayaa qandaraaska uu haatan ku joogo kooxda Leicester City wuxuu ku egyahay ilaa iyo xagaagii 2023, isagoo u ciyaaray xili ciyaareedkan 31 kulan, wuxuuna dhaliyay 3 gool.
Xidig hore ee kooxda Chelsea ah oo si aan horey loo arag u weeraray Luis Suarez